अन्तराष्ट्रिय - Lite Nepal
१० सन्तान एकैपल्ट जन्माएको भनिएकी दक्षिण अफ्रिकी महिला गर्भवतीसमेत नभएको पुष्टि
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले १० बच्चा जन्माएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको भनेर प्रचारित समाचार गलत प्रमाणित भएको छ। बीबीसीका अनुसार बीबीसीसमेतले एकैपल्ट १० बच्चा जन्माएको भनेर रिपोर्टिङ गरिएकी महिला गोसिआमे सिथोल गर्भवती समेत नभएको आधिकारिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अहिले ३७ वर्षीया ती महिलालाई अनुसन्धानको दायरामा आएको र मानसिक स्वास्थ ऐन अन्तर्गत नियन्त्रणमा लिइएको […]
अब स्पेनमा घर बाहिर निस्किँदा पनि मास्क लगाउनु नपर्ने
बार्सिलोना । स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले जुन २६ देखि घरबाटबाहिर निस्किँदा अनिवार्यरूपमा मास्क लगाउनु नपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री सान्चेजले शुक्रबार बार्सिलोनामा इकोनोमिक फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बहुप्रतीक्षित घोषणा गरेका हुन् । ‘४ करोड ७० लाख स्पेनी देशभक्तहरू माझ एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न चाहन्छु,’ समाजवादी नेता सान्चेजले भने,’ अर्को बिहीबार हामी एउटा असाधारण […]
भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर अक्टोबरमा देखिन सक्छ
काठमाडौं । भारतमा आगामी अक्टोबरबाट कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को अर्को लहर आउन सक्ने विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् । स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, संक्रामक रोग विशेषज्ञ, महामारीविद् र प्राध्यापक समाचार संस्था रोयटर्सले गरेको कुराकानीमा उनीहरुले तेस्रो लहर आउन सक्ने तर अहिलेको भन्दा नियन्त्रित हुने धारणा राखेका हुन् । अक्टोबरमा सुरु हुने तेस्रो लहर वर्षको अन्तिमसम्म रहने उनीहरुको […]
नाइजेरियामा डुंगा दुर्घटना, ५० भन्दा धेरैको मृत्यु, केही वेपत्ता
नाइजर । नाइजेरियाको समुद्रमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ५० जना भन्दा धेरै यात्रुको मृत्यु भएको छ । अरु दर्जनौँ मानिस हराइरहेका छन् । नाइजेरयाको उत्तरपश्चिम राज्य केब्बीस्थित समुद्रमा क्षमता भन्दा धेरै यात्रु भएकाले डुंगा दुर्घटना भएको बताइएको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार उक्त डुंगामा कम्तिमा १५० यात्रु सवार थिए । उनीहरुमध्ये धेरैजसो केब्बी राज्यबाट व्यापारका लागि […]
भारतमा कोरोना संक्रमण घट्दै, के होला अब नेपालमा ?
विराटनगर । भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ । दैनिक वृद्धिमा दुई साता यता कमी आएको हो । लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ १ लाख ९५ हजार ८१५ जनामा संक्रमण भएको छ । यो संख्या सोमबारको तुलनामा झण्डै २७ हजारले कम रहेको बताइएको छ । पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको […]
भ्याक्सिन लगाउन टुरिस्ट बनेर रुस जान थाले भारतीयहरु
एजेन्सी । अहिले संसारभरिका मुलुकलाई कोरोनाभाइरसविरूद्धको भ्याक्सिन चाहिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्तले बनेको भारतमा त झन् खोपको माग धेरै छ । खोप लगाउन चाहने सबैले खोप पाएका छैनन् । केही भारतीय भने खोप लगाउनकै लागि पर्यटक बनेर रूस पुग्न थालेका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार स्पुतनिक भी खोप लगाउन पाइने भएपछि ट्राभल […]
भारतमा कोरोना : २४ घण्टामा ४ हजार तीन सय ४० ले गुमाए ज्यान
विराटनगर । भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार तीन सय ४० जनाको मृत्यु भएको हो । भारतमा एकै दिन धेरै सङ्क्रमितको मृत्यु पहिलो हो । यसअघि दैनिक चार हजार हाराहारीमै सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको थियो । भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा केही हदसम्म सफलता प्राप्त भइरहे पनि दैनिक […]
मुख्यमन्त्रीलाई आयो पाँच दिनभित्र ज्यान मार्ने धम्की
विराटनगर । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। प्रहरीका अनुसार गत २९ अप्रिलमा आपतकालीन सेवाका लागि बनाइएको ११२ मा म्यासेज गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिइएको हो। उनले पाँच दिनभित्र मुख्यमन्त्रीलाई मारिदिने चेतावनी दिएको सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रहरीलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्( मलाई जे गर्न सक्छौं गर। यस्तो म्यासेज आएपछि लखनउको […]
भारतीय खोप उत्पादक कम्पनीका सिइओ बेलायत पुगेर किन यसो भने ?
नयाँदिल्ली । सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अदर पुनावाला भारतमा आफूमाथि अत्याधिक दबाब आएको भन्दै बेलायत गएका छन् । भारतले बेलायतका लागि उडान प्रतिबन्ध जारी गर्नुअघि नै उनी शनिबार नै लण्डन पुगेका हुन् । दि टाइम्ससँगको अन्तरवार्ता पुनावालाले आफूमाथि अत्यधिक दबाब आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमणले […]
खोप लगाएका मानिसले अमेरिकामा मास्क लगाउन नपर्ने
एजेन्सी । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडिसी)ले पूर्ण खोप लगाइसकेका अमेरिकीहरूले बाहिर खुला क्षेत्रमा हिँडडुल गर्दा मास्क लगाउन नपर्ने घोषणा गरेको छ । खोपका आवश्यक मात्रा लगाइसकेकाहरूले एक्लै हुँदा वा खोप लगाइसकेका अन्य व्यक्तिहरूको सानो समूहमा अनुहार ढाक्न नपर्ने उसले नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । तर कोठाभित्र वा भिडभाडयुक्त स्थलहरूमा अझै […]